Heshiisyada TOP ee usbuuca ee Amazon - Juunyo 2017 | War gadget
Somos geeks, Waxaan jecel nahay tikniyoolajiyadda sidaas darteedna elektaroonigga macaamiisha. Taasi waa sababta aan marwalba uga feejigan nahay nooc kasta oo dalab ah oo xiiso leh oo ka dhalan kara maalinba maalinta ka dambaysa. Si kastaba ha noqotee, waxaan helnay fikrad aad uga wanaagsan, waxaan kuu soo qaadan doonnaa dalabyo toddobaadle ah oo ay tahay inaadan ka maqnaan, maxaa yeelay waxaad heli doontaa qalabka elektiroonigga ah iyo agabyada ugu fiican qiimo aan laga adkaan karin.
Sidaas darteed, nala joog oo soo hel kuwa ugu xiisaha badan ee usbuucii la soo dhaafay ee Juun (laga bilaabo Juun 26 ilaa Luulyo 3) oo aad ka faa'iideysatid inaad telefishanka beddesho, aadna hesho taleefanka gacanta ee cusub ...
Qoraalkan si joogto ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa maalinba maalinta ka dambaysa, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad dib ugu soo laabato si aad u hubiso waxa dalabkan cusubi u yahay maalinta laga hadlayo.
1 Qiimaha Amazon (Juun 26-Luulyo 3)
2 Shan yuuro oo hadiyad ah oo ku taal Amazon oo iibsanaya foojarro hadiyadeed
Qiimaha Amazon (Juun 26-Luulyo 3)
Soo qaado hadiyado lagu qiimeeyo € 150 adoo iibsanaya alaabooyinka Canon ee ku jira xulkan: LINK
LG 49 inch TV (4K, IPS) € 766 oo leh rarida hal maalin
Motorla moto g4 oo lagu darayDaabacaad gaar ah oo Amazon ah oo kaliya for 179,99 (qiimo duug ah € 199,99, soo bandhig ansax ah illaa Juun 27).
JVC HA-EBTS dhegaha dhagaha ee from 29,90, qiimo dhimis ah 38% qiimaheeda caadiga ah inta lagu jiro 26-ka Juun.
32 inji LG Monitor Monitor laga bilaabo € 368,18, iyada oo qiimo dhimis lagu sameeyay 18% illaa iyo July 2
Wax alaab ah lama helin. kaliya .21,99 45, hoos u dhaca qiimaha 26% ilaa XNUMX-ka Juun
Shan yuuro oo hadiyad ah oo ku taal Amazon oo iibsanaya foojarro hadiyadeed
Dalabkii cajiibka ahaa ee Amazon ayaa soo laabtay kaas oo aan ku heli doonno as 5 hadiyad ah marka aan iibsano ugu yaraan € 25 jeegag hadiyado. Waxaad u aadi kartaa inaad ku iibsato kaararkaaga hadiyadaha soo socda LINK. Xusuusnow in dalabkan la heli karo illaa Juun 30, markaa mahelaysid maalmo badan oo aad uga faa'iideysato. Waa wax cajiib ah oo ka mid ah kuwa ugu macquulsan ee macaamiisha caadiga ah ee Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » TOP heshiisyada usbuuca ee Amazon - Juunyo 2017
Wow, in 49-inch LG ah anigaa iska leh! Waan jeclahay sida xallinta 4K ay ugu muuqato wax badan guddiga IPS
Jawaab ku sii Araceli Guardia
sidee fiican woooo ay iila yaabeen